Record Music Site Rdio / Radio ka akporo ekwentị
Unu na mbụ mkpa idekọ music si Radio ma ọ bụ Rdio na a nwere ike mere na enyemaka nke guide- Site Radio / Rdio ka iTunes
Mgbe songs si Radio ma ọ bụ Rdio èdeghi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ, ha ga-n'okpuru ndepụta "Kọrọ" nke bụ ugbu n'okpuru iTunes n'ọbá akwụkwọ na aka-ekpe-n'akụkụ nke TunesGo n'ụlọ peeji. (Lee akara red igbe n'okpuru nyere screenshot)
Ugbu a ị chọrọ iji họrọ song a na ndepụta na ị chọrọ ka ịdekọ gị Android ngwaọrụ. (Nseta ihuenyo egosi Track 3 ka họrọ song)
Nzọụkwụ 3. Jikọọ Android
The Android ekwentị na nke song nwere na-dere ugbu a kwesịrị ka a jikọọ gị PC eji a USB. Otu USB ọgwụgwụ na jikọọ ekwentị na ọzọ na-PC si USB n'ọdụ ụgbọ mmiri. Aha nke Android ekwentị ga-ugbu a na-ahụ anya n'okpuru "Ngwaọrụ" na n'aka ekpe nke menu (nseta ihuenyo egosi Samsung gt-I9300)
Bugharịa na "Kọrọ" nhọrọ nke bụ ugbu na n'aka ekpe menu ma ugbu a, nri pịa ya. Ị ga-enweta a dobe ala menu na site na nke a mkpa ka ị họrọ, "Export Iji" nhọrọ na mgbe ahụ lekwasịrị gam akporo ekwentị ka nke track kwesịrị ka a dere. (Nseta ihuenyo egosi Samsung gt-I9300)
The dere songs agaghị apụta n'okpuru "Music" ndepụta nke Android ekwentị na n'aka ekpe menu.
Ọzọ: Record Music Site Radio na PC / Mac